ESI EWEGHACHITE VIDIYO EHICHAPỤ NA IPHONE - IOS - 2019
Esi eweghachite vidiyo ehichapụ na iPhone
Mbibi mberede nke vidiyo site na iPhone - ọnọdụ ahụ bụ ihe nkịtị. N'ụzọ dị mma, enwere nhọrọ iji weghachite ya.
Iweghachi video na iPhone
N'okpuru ebe a, anyị ga-atụle ụzọ abụọ iji weghachite vidiyo ehichapụ.
Usoro 1: Album "Na-adịbeghị anya ehichapụ"
Apple chetara eziokwu ahụ na onye ọrụ nwere ike ihichapụ ụfọdụ foto na vidiyo site na nleghara anya, wee ghọtara otu album pụrụ iche "Na nso nso a ehichapụ". Ka ọ na-apụta ìhè site na aha ahụ, faịlụ ndị ehichapụrụ site na ihe nkiri iPhone ga-abanye na ya.
Mepee ngwa foto ọkọlọtọ. N'okpuru windo, pịa taabụ "Albums". Pịgharịa gaa na ala nke ibe, wee họrọ ngalaba. "Na nso nso a ehichapụ".
Ọ bụrụ na ehichapụ vidiyo na-erughị ụbọchị 30 gara aga, ma a kpochabeghị akụkụ a, ị ga-ahụ vidiyo gị. Mepee ya.
Họrọ bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri ala "Weghachite"wee kwado ihe a.
Emeela. Vidiyo ahụ ga-apụtaghachi na ebe ọ na-emebu na ngwa foto.
Usoro 2: iCloud
Usoro a nke mgbake vidiyo ga-enyere aka ma ọ bụrụ na i meela ka ịgbanye foto na vidiyo na-akpachi anya n'ọbá akwụkwọ iCloud gị.
Iji lelee ọrụ nke ọrụ a, mepee ntọala nke IPhone, wee họrọ aha akaụntụ gị.
Mepee ngalaba iCloud.
Họrọ ala "Foto". Na windo na-esote, jide n'aka na ị meela ihe ahụ "ICloud Photo".
Ọ bụrụ na enyere nhọrọ a, ị nwere ike iji weghachite vidiyo ehichapụ. Iji mee nke a, na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ijikọ na netwọk, malite ihe nchọgharị ma gaa na ebe nrụọrụ weebụ iCloud. Debanye na ID Apple gị.
Na window ọzọ, gaa na mpaghara "Foto".
A ga-egosiputa foto na vidiyo niile ebe a. Chọta vidiyo gị, họrọ ya na otu igodo, wee họrọ akara ngosi nbudata n'elu window ahụ.
Kwenye ịchekwa faịlụ ahụ. Ozugbo download ahụ zuru oke, vidiyo ahụ ga-adị maka nlele.
Ọ bụrụ na gị onwe gị na-eche ọnọdụ ahụ ajụjụ ma nwee ike iweghachi vidiyo na ụzọ ọzọ, gwa anyị banyere ya na ihe ndị ahụ.